Qubanaha » Daawo Sawirrada Sarkaal Nabad Sugidda ka tirsan oo Qarax la fashiliyay loogu xiray Gaarigiisa
Daawo Sawirrada Sarkaal Nabad Sugidda ka tirsan oo Qarax la fashiliyay loogu xiray Gaarigiisa
May 12, 2017 - jawaab
Qubanaha.net-Muqdisho-Ciidamada nabad sugida iyo sirdoonka Qaranka ayaa fashiliyey maanta qarax lagu soo xiray gaari u lahaa sarkaal ka tirsan ciidankaas oo marayey agagaarka Ex-kuliyadii Siyaad oo ku taalla wadada warshadaha ee magaalada Muqdisho.
Gaariga qaraxa lagu soo xiray oo u watay sarkaalkii lahaa ayaa waxa agagaarka Kuliyadda Jaalle Siyaad ku joojiyey gaari kale oo u watay nin ay saaxiibo ahaayeen kaasoo weydiistay beteriga lagu xiro gaadiidka.
Sarkaalkan ayaa la sheegay inuu joojiyey gaariga si uu beteriga ugu soo bixiyo saaxiibkiis balse inti iu ku howlanaa raadinta beteriga ayaa waxaa gaariga u watay hoostiisa lagu arkay miino lagu xiray oo qorshuhu ahaa in isaga lagu qaarajiyo.
Ciidamada Booliska ee miino baarista qaabilsan oo la wargeliyey ayaa markii dambe gaaray goobtaas, iyagoo xiray wadada labadeeda dhinac, isla markaana xayiray gaadiidka iyo dadka socotada ah, waxayna ugu dambeyn ku guuleysteen iney miinadii ka furaan gaarigii uu lahaa sarkaalka nabad sugida oo halkaas si nabad ah uga dhaqaaqay.
Xaalada wadada warshadaha ayaa caadi ku soo laabatay, waxaana xusid mudan in saraakiil, masuuliyiin iyo dad kale oo fara badan lagu qaarajiyey miinooyin loogu xiray gaadiidkooda halka qaar kale ay ku lixaad beeleen.